Ka hel caroms dhab ah arcade ee biil Pool Royale | Androidsis
Pool Royale waa ciyaar bilyaariyo Mareykan ah taas oo ay tahay inaan ku muujino qiimaheena calaamadaha aan u leenahay inaan budo, si markasta oo aan u garaacno kubbadda cad, aan ku garaaci karno calaamadda oo markaa aan ugu gudubno heerar.
Cinwaan cusub oo loogu talagalay Android oo aan xumaan haba yaraatee iyo in, in kasta oo ay ka maqantahay waxoogaa jilid ah (Waxay u egtahay toogasho arcade ah), waxay ku filan tahay inay naga qaadato khibradaas ah ciyaarista bilyaardiyada Mareykanka, in kasta oo ay la jaan qaadayaan.
1 Arcade ka badan jilitaanka
2 Dareen wanaagsan Pool Royale
3 Arcade aan caadi aheyn oo loogu talagalay ciyaaraha degdegga ah
Arcade ka badan jilitaanka
In Pool Royale waxaan isku aragnaa ciyaar bilyaar Mareykan ah oo in ka badan jilitaanka dhabta ah lagu kharash gareeyay inuu noqdo arcade. Laakiin ma ahan xaqiiqda ah inuusan aqoonin sida loo ekeysiiyo fiisigiska kubbadaha ama daqiiqaddaas oo aan ugu baahanahay xagasha toogashada si aan u sameyno carom wanaagsan, laakiin maxaa yeelay heer kasta waxaan horay u lahaan doonnaa kubbado taxane ah miiska si aad ugu rido xoogaa istaroog ah intii suurtogal ah.
Istaroog wuxuu xadidayaa taas waxay noo sheegi doonaan sax ahaanta in ay tahay inaan qaadno kulamada. Bilowgeedana way fududaan doontaa, inkasta oo sidaan horay u socono aan ogaan doonno inaysan sahlaneyn in la dhammeeyo in kubbadahaas la geliyo tirada xadidan ee istaroog ee aan haysanno.
Sida jilitaanka laftiisa, si fiican ayaa loo qabtay iyo fiisigiska sheyga ayaa noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano tallaaladaas saxda ah in aan isku dayno inaan siino. Waxaan leenahay shaashad aan ku beddelno jihada naadiga oo aan markaa u hagaajino tallaalka, iyo maxay noqonaysaa isla naadiga laftiisa oo lagu hawlgelin doono tilmaam hoos u socota oo heysa ka dibna sii deynaysa.
Dareen wanaagsan Pool Royale
Pool Royale wuxuu na qaadanayaa, sidaa darteed, kahor arcade ku saleysan bilyaariyada Mareykanka taas oo ah dhammaan kubadaha waa in la geliyaa 6da god ka hor intaadan aadin tan madow. In kasta oo runta la sheego, halkan waxay ka doorbidayaan inay ka dhigaan riwaayadahaas si ay u helaan sacab kuwa na arka annagoo ciyaareyna.
Carambola waa madadaalo, sidaa darteed wax xun kuguma aha inaad isku daydo qaabab kala duwan oo wax looga qabanayo heerarkaas si aad isugu daydo inaad ku dhammaysato hal ama laba hits. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan cayaaraha ayaa ah waxaan leenahay heerar taxane ah oo aan wajahno dhamaadka. Kani wuu sii dhib badnaan doonaa wuxuuna u baahan doonaa awooddeenna aan ku dhaafi karno. Hadday sidaas tahay, waxaan u gudbi doonnaa qaybta heerka ku xiga.
Waa inaan taas ku xusuusanno halkan kubadaha istiraatiijiyad ahaan waa la is taagay, markaa ha filanin inaad la ciyaarto ciyaar AI ama ciyaartoy kale. Waxaa jira hal dariiqo oo gaar ah oo aad ku wajihi doonto kuwa carambola ee ay tahay inaad siiso.
Arcade aan caadi aheyn oo loogu talagalay ciyaaraha degdegga ah
Marka Pool Royale ayaa naga hor qaadaya Dhamaan waa wax soo saar wanaagsan oo lagu dhaleeceyn karo la'aanta habab kala duwan oo ciyaaro ah. Sida la'aanta qaab ciyaareed badan oo ciyaartoy badan ayaa inoogaga tagaya wax yar oo qabow, maaddaama aan awoodno inaan ciyaar la ciyaarno ciyaartoy kale, iyo in ka badan marka la isku dheellitiro, waxay noqon doontaa bakooradda.
Farsamo ahaan waa ciyaar aad ufiican oo dhexdeeda ah wuxuu muujinayaa sawiradeeda si wanaagsan loo farsameeyay. Fiisigiska walxaha ma xuma haba yaraatee, in kasta oo daqiiqadaha qaarkood ay soo bixi karaan dhaqdhaqaaqyo yar oo dabiici ah, in kasta oo iyagu ay noqon doonaan kuwa ka reeban, maaddaama guud ahaan nabarrada iyo caromadu ay dhacaan markaan ka shaqeyno. Waxay u leedahay qaabkaas muuqaalka ah astaamaha iyo meelaha kala geddisan ee firaaqada ah oo aan nafteena ku amaahan doonno inaan ku ciyaarno.
Pool Royale wuxuu u yimaadaa Android si aan caadi aheyn taasi ma dooneyso inay noqoto kan ugu fiican kuwa ugu fiican, laakiin taasi waxay na siisaa waayo-aragnimo cayaareed oo wanaagsan oo aan ku raaxeyno kuna qaniino heerarkaas. Adoo yar oo sabar ah waxaad awoodi doontaa inaad heshid waxyar oo hits ah sidaasna aad uga adkaato heerka ugu dambeeya si aad ugu sii socoto tan xigta. Waxaad ku haysataa bilaash. Waanu kaa tagnay la ciyaarta kale barkadda.
Ujeedada Fiisigiska La Gaadhay
Habab badan ayaa la la'yahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Bilyaariyada wanaagsan ee Mareykanka ee Arcade Pool Royale for Android